Qorshe ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda Gonolka Hiiraan. – XAMAR POST
Taliye ku xigeenka qeybta 27-aad ee ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Saalax Yacquub oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay wadaan qorshe ballaaran oo Al-Shabaab looga saarayo gobolka Hiiraan.
Jeneraal Saalax ayaa tilmaamay inay ku howlan yihiin ku howlanyihiin furitaanka wadooyinka gobolka Hiiraan ooaay ku suganyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab, isaga oo si gaar ah carabka ugu dhuftay inay furi doonaan jidka Beledweyne iyo Buulo-Burte.
“Waxaan diyaaraneeynaa sidii aan u furi lahaayn wadooyinka gobolka Hiiraan gaar ahaan wadada isku xirta Beledweyne iyo Buuloburte, wadadan muhiim ayaay u tahay shacabka, waxaana adkaaday ganacsiga isaga kala goosha deegaanadan. Ciidanka waxaa ka go’an inaay xoreeyaan wadooyinka gobolka”. ayuu yiri Jeneraal Saalax.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in xoojin doonaan howlgallada iyo dhaq dhaqaayada Al-Shabaab looga saarayo guud ahaan deegaanada maamulka HirShabelle.
Deni iyo Qoor-Qoor oo ka wadahadlay xiisada MUDUG